XOG CUSUB: Sheekh Aaden-Sunne & Wadaaddo Kale Oo La Xidhan Oo La Hor-keenay Maxkamadda Hargeysa - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » XOG CUSUB: Sheekh Aaden-Sunne & Wadaaddo Kale Oo La Xidhan Oo La Hor-keenay Maxkamadda Hargeysa
XOG CUSUB: Sheekh Aaden-Sunne & Wadaaddo Kale Oo La Xidhan Oo La Hor-keenay Maxkamadda Hargeysa
Maalinimadii Khamiiseed taariikhda miilaadiguna ahayd 12/07/2018 ayaa waxaa Maxkamadda Hargeysa la hor-keenay Sheekh Aaden Cabdiraxman Warsame (Sunne) iyo dhalinyaro wadaaddo ah oo sheekha ay isku kiis yihiin.
Xeer ilaalinta Somaliland ayaa soo oogtay dambiyo lasoo dhoob-dhoobay oo sal iyo raad toona lahayn, waxaanay dambiyadaasi noqdeen kuwo xaqiiqda ka fog, kadib markii markhaatiyadii la hor-keenay maxkamaddu ay fashilmeen.
Ilaa iyo hadda ma jirto wax caddaymo ah oo loo helay dambiyada been-abuurka ah ee lagu eedaynayo Sheekha iyo dhalinyaradaasi wadaadada ah ee la xidhan. Waxaana caddaatay xadhigan xaq-darrada ah in ay ula badheedhay xukuumaddii Siilaanyo iyo ta haatan ee Muuse Biixi.
Bil iyo dharaaro ayaa ka dhiman sannad dhamaystiran oo sheekha iyo wadaaddaasi ay xaqdarro ugu xidhan yihiin xabsiga Hargeysa. Muddada intaasi le’eg-na waxay xukuumadda haatan iyo tii ka horreysayba ay u la’yihiin fal-dambiyeed ay food-saaro uga dhigtaan xadhigoodan sharci-darrada ah.
Koonfurta Somaliya ayaa xilliyadii lasoo hayey ee hoggaamiye-kooxeedyadu ka jireen waxaa ka dhici jiray falal aad u fool-xun oo wadaadada lagu ugaadhsan jiray, iyadoo la beegsan jiray wadaad kasta, kadibna laga iibin jiray Gaallada, sida Maraykanka Jabuuti deggen oo kale.
Fal-dambiyeedyadaasi ay hoggaamiye-kooxeedyadu ku xalaashan jireen dhiigga iyo Cirdiga Wadaaddada, ayaa waxaa laga dhaxlay Xaaladdaasi loo maaro la’yahay ee haatan ka taagan caasimaddii Soomaaliya ee Muqdisho.
Haddaba Xukuumadda Muuse Biixi oo muddo kooban haysay talada dalka ayaa haatan u muuqata mid raad-guraysa falalkii culimada rabbaaniyiinta ah lagu beegsan jiray, ee laga raacay Qab-qablayaashii Xamar. Waxaanay wax-qabad ka dhigataa tacdiibinta Sheekh Aaden-Sunne iyo wadaada ehelu-diinka ah ee la xidhan.
Maalinta Salaasada ah ee innagu soo fool-ka leh ayaa la filayaa in mar kale Sheekh Aaden-Sunne iyo Wadaadada la xidhan-ba la hor-keeno Maxkamadda, lana soo gunaanado dacwaddooda oo dal iyo dibad-ba aad loo dhawrayo waxa kasoo bixi doona.
Xogta Maxkamadda iyo xaaladda wadaadadaba waxaan kasoo xigannay Wariye Maxamed Cabdi Toosane. Isagoo xogtaasi ku shaaciyey bartiisa uu ku leeyahay Internet-ka, gaar ahaan Face-book-ga.
July 14, 2018 at 11:31 pm
Sheekh Aadan iyo wadaada la xidhani cida ay u xidhan yihiin maaha Somaliland ee waa gaala laamaha sirdoon uga furanyihiin Hargeysa sida maraykanka iyo ingiriiska iyo xabashida ,maamulaka Hargeysa ka taliyaana waa gacantii lagu qabtay culmada ,cida dhabata ah ee ay u xidhan yihiin culilmadani iyo qaar kaloo jeelasha lagu ilaawaybay waa gaaladaasi .gaaladaasi oo doonaysa in dadka ka dhigaan ku bilaa diin ah,cidii dadka taasi u sheegtana gabraaratadaasi loo dirayaa dawalda lagu sheegayo ,sheekh Aadana shirqoolka ay gaaladu la maagan tahay ummaddan muslimiin tahay ayuu u iftiimiyey isaga iyo rag tira oo kale.ilaahay dhammaantoodba ha dhawro.
Waziirka Difaaca Mareykanka Oo Isku Day Dil Ka Badbaaday.
Qushi-socod (Gabay): Cabdi Iidaan Faarax (Hanqadh).
Madaxweynaha Somaliland Oo Qoraal Garnaqsi Ah U Kala Diray Beesha Caalamka
DAAWO: Dr Gaboose Oo Muxaadaro Qiimo Badan Kaga Hadlay Neerfaha